သင်ဇာဝင့်ကျော် နှင့် မိုးဟေကို တို့ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးတွင် ညှိနှိုင်းကြမယ်
Home » Celebrity News » Myanmar Actress » သင်ဇာဝင့်ကျော် နှင့် မိုးဟေကို တို့ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးတွင် ညှိနှိုင်းကြမယ်
#Celebrity News #Myanmar Actress
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် နှင့် မိုးဟေကို (မိုး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး) တို့က နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းကြဖို့ အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးမှာ ဒီကနေ့၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် ချိန်းထားကြပေမယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော် က မနက် (၁၀) နာရီမှာ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ မရောက်လာခဲ့တဲ့ အတွက် ညနေ (၃) နာရီမှာ တွေ့ဆုံဖို့ အတွက် ထပ်ချိန်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“Professional ဆန်တဲ့ လူက Professional အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ စာချုပ်ထဲမှာ သူ့ဖက်က ရပိုင်ခွင့် ပေးထားသလို၊ သူ့ဖက်က လုပ်ဆောင်ရမယ့် တာဝန်လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ စာချုပ်ကို မြန်မာလိုပဲရေးထား တာပါ။ သူသေချာ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးမှ တစ်ဖက်သက် စာချုပ်လို့ အခုပြောလာပါတယ်။ အစ်မ အနုပညာသည် အချင်းချင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မနစ်နာ မထိခိုက်စေချင်ပါဘူး” လို့ မိုးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ပိုင်ရှင် မိုးဟေကို က ပြောပါတယ်။
“အနုပညာရှင်ဆိုတာ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို ကိုယ်တာဝန်ယူဖို့ လိုပါတယ်။ တစ်ဖက်သက် Facebook မှာ ရေးတာကတော့ တအားလွန်လွန်းပါတယ်၊ အခုဆိုရင် သူကြောင့် နှစ်ဖက် FANS တွေ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကုန်ကြပြီ။ အစ်မက အနုပညာ ညီအစ်မ အချင်းချင်း တစ်ဖက်စောင်းနင်း မလုပ်ပါဘူး” လို့ သရုပ်ဆောင် မိုးဟေကို (မိုး ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်ရေး) ဒီကနေ့၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွင် Myanmar Celebrity သို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
Myanmar Celebrity Update: Moe Hay Ko reacts on Thinzar Wint Kyaw Case. #MoeHayKo #MoeFilmProduction #MyanmarActress
Mitsubishi Xpander ရဲ့ Brand Ambassador ပန်းရောင်ခြယ် တို့ မိသားစု
မြင့်မြတ်၊ သက်မွန်မြင့်၊ ရဲလေး တို့ရဲ့ "ဘာလာလာ" ရုပ်ရှင် Red Carpet Show
အဆိုတော် Raychel Tayza ရဲ့ "ကမ္ဘာ" တေးစီးရီး မိတ်ဆက်ပွဲ
Myanmar Celebrity News Delivered Daily!
Celebrity News Gallery Fashion Celebrity Family Event Relationship Lifestyle Movie Making Entertainment Music Show Beauty Contest Travel Photos
Job @ MC
© 2017 Myanmar Celebrity News | Entertainment News | MyanmarCelebrity.Com